Iholide ethakazelisayo kunazo zonke iJubile elalinikezelwe ekupheleni kominyaka engamashumi ayisishiyagalolunye yendoda. Akukhathaleki ukuthi ubani ozogubha umkhosi - indoda noma owesifazane, ngoba wonke umuntu leli holide libaluleke kakhulu. Lesi yisikhumbuzo sokuqala emva kwekhulu leminyaka elidlule, ngakho kufanele kuphawulwe kufanelekile. Umuntu oye wafika kule minyaka, uba mhle, unolwazi oluhle empilweni futhi uyakwazi ukunikeza iseluleko esihlakaniphile.
Uma kungumbuzo wendoda, cishe, kuze kube yileli minyaka uzuze ekuphileni kwento yonke, eyayifuna: yenzeke emkhakheni wezemisebenzi, ikhulele ngokwanele izingane futhi inesimo "umkhulu". Ngalolu suku, akadingi lutho ngaphandle kokunakekelwa nokukhathalela abathandekayo bakhe, ngakho-ke kufanelekile ukucabanga ngokuhalalisela nokuthi ungafika kanjani ngejubane lomuntu oneminyaka engama-60. Imincintiswano emihle ngeke ijabulise umfana wokuzalwa kuphela, kodwa futhi nayo yonke imenywa.
Izipho, ezingakufanelekeli ukunikeza ijubili
Iminyaka engu-60 yinto efanelekayo. Kungcono ukuthi afike engenakho isipho nhlobo, kunokuba anikeze okuncane, okufana ne-foam yokushefa. Kumele uqaphele ukuthi lokhu, ngaphezu kwakho konke, iholidi lomphefumulo. Ngakho-ke, akudingeki ukuthi uthenge izipho zabahola impesheni, njengezikhwama ezifudumele, ama-slippers ekhaya, umcamelo okhululekile. Phela, indoda ingase icabange ukuthi ibhekwa njengomkhulu omdala.
Imizwelo enhle ingabangela futhi izinto ezibonisa ukuthi umuntu usuzohlala emhlalaphansi. Ngokungafani nobulili besilisa, amadoda awawatholi izipho ezingokomfanekiso noma ama-romantic trinkets. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukuba ajabule ngezingelosi ezinhle, amawadi noma iziqu. Okungafani kungaba izinto ezihloswe ukuhlobisa insimu, i-dacha neyensimu.
Unganiki umuntu isethi yezingubo, i-tableware nezinye izisetshenziswa zekhishi.
Izipho ezingcono kakhulu zeqhawe losuku
Uma kwenzeka umgcini womkhosi ewela kumngane wezivakashi noma osebenza naye, ungamnikela njengesipho esinjalo njengewayini elibizayo lomkhiqizo wekhwalithi. Ikakhulu lokhu lesi sipho kuyoba ukuthanda komuntu oqoqa imikhiqizo efanayo. Ungabi nhlobo ngokweqile mayelana nezimonyo njengesipho kwi-hero yosuku. Ungabonisa amafutha anamanani nemikhiqizo evela kumkhiqizi owaziwayo. Ukuqaphela okukhethekile kufanele kuhokhwe ezithakazelweni zomfana wokuzalwa. Isibonelo, uma ethanda ukudoba, induku enhle yokudoba, isikebhe noma i-suit engenakuphulukiswa kuyoba isipho esihle.
Abanye abantu bathola izimoto abaneminyaka engama-60, ngakho-ke badinga umgibeli omuhle, umdlali oshayelwe uphawu noma ukuma kwefoni. Uma iJubane inomqondo omuhle kakhulu, ungamnika isipho samahlaya, isibonelo, i-cartoon esithombeni sakhe. Uma umuntu esebenza ehhovisi lakhe, ngakho-ke izivuno zakhe kungenzeka ukuba zenze isithombe sokunethezeka sezinto ezibiza kakhulu ezizogcizelela isimo somnikazi. Itafula elincane lekhofi, i- armchair noma ishalofu lingasiza futhi.
Njengomthetho, ngaleso sikhathi umuntu uzuze okuningi empilweni, ngakho-ke isipho kufanele sinikezwe udumo. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukulungiselela izinkondlo zokuhalalisela kusengaphambili. Kubalulekile ukucabanga nokubamba indawo yokukhumbula umuntu oneminyaka engama-60, izikhathi ezipholile zingenza ukuhleka ijubili nazo zonke izivakashi.
Isimo mayelana ne-Hottabych
Izigcawu zeJubane lomuntu oneminyaka engama-60, amahlaya amahle kanye nemincintiswano angase ahluke. Bonke bazokwenza iholidi likhanyise futhi lijabulise nakakhulu. Uma iJubane inomqondo omuhle, ungalungiselela ukulungiselelwa okuhleliwe, lapho indima eyinhloko izodlalwa yi-Old Man Khottabych. Ukudweba ijubile yendoda eneminyaka engama-60 ngehlaya kubukeka kahle, udinga ukubhalisa ngaphambilini ihholo. Ukuze uqiniseke, ukubhema kufanele kuvunyelwe ngaphambi kokuqala ukusebenza.
Umphathi, ovele ngokuzumayo esiteji, kufanele enze sengathi akaqondi ukuthi ukhona kuphi. Ngemva kokucabanga okuningi, impendulo ifika ekhanda lakhe: "O, lokhu kuyisikhumbuzo! Kulungile, futhi ungubani umlandu wendabuko? "
Umlingisi wezinkondlo udinga ukuzungeza zonke izivakashi, futhi ngokushesha nje lapho ehlangana neqhawe, udinga ukusho le nkulumo elandelayo: "Ngakho-ke, futhi sesigcwalisekile kangakanani? Mhlawumbe, kakade? Yebo, ingaphezu kwekhulu, awubuki! "
Ngemuva kwemibuzo, iJubile kumele imbule iminyaka yakhe, uma lokhu kungenzeki, umholi ngokwakhe ufunda isibalo kusuka emibhalweni yama-posters noma izivakashi.
U-Hottabych uthi uyazi ngeholide elizayo, ngakho akazange eze angenalutho. Emva kwalokho, uqala ukudansa nokushaya izandla, engabonakali ukulenga amabhaluni phezu kwekhanda lejubili. Kufanele kube nemali ekhokhwayo kubo.
I-Hottabych: "Ngiyathanda ijubili yami, ngiyakwazi ukufeza konke okufisayo. Uma uthanda, ngiyakwenza ube ngumuntu ocebile kakhulu emhlabeni. "
Emva kwala mazwi, indoda endala kufanele inqume unyawo lwayo futhi iqhume yonke ibhola ukuze amanothi awele eqenjini losuku.
I-Hottabych: "Futhi mhlawumbe imali ayiyona injabulo nhlobo? Ingabe ufuna impilo ibe yinto enhle kakhulu? "Ukhalisa izinwele ezivela esileni sakhe futhi aphule unyawo lwakhe. Emva kwalokho, isivakashi singena esiteji sibambe isibonakaliso esikhulu ngokubhalwe "impilo" ezandleni zakhe.
I-Hottabych: "Yebo, impilo ihle, kodwa uthando liyadingeka!"
Umholi udonsa unyawo lwakhe, kanti iJubane kukhona abesifazane abathathu, phakathi kwabo kukhona nomkakhe.
I-Hottabych: "Khetha, mngane wami othandekayo, konke kuhle, ukulungele ukukunika uthando. Nakuba, lokhu (okukhetha umkakhe) kukuthandela kakhulu. Bonisa zonke izivakashi zakho imizwa eqotho. "
Bonke abantwana nabazukulu bavela, bephethe umbhalo othi "injabulo" ezandleni zabo.
I-Hottabych: "Bheka nxazonke. Ubonani? Lena injabulo yangempela. Unomndeni omkhulu. Yamukela, mngane wami, ngiyakuhalalisela kakhulu, yibani nonke enempilo, enhle nenjabulo. Kodwa, yisikhathi sami ... "
Umholi wenza umnsalo namacembe.
NgamaHhovisi wezobuciko, imidwebo emangalisayo yendoda eneminyaka engu-60 iyatholakala. Amahlaya amahle - lokhu, kunjalo, kuhle, kepha ngalolu suku kuyafaneleka ukulalela ukunakekelwa kwemfanelo yomsunguli womkhosi. Kudingeka ukuthenga indondo yokudlala futhi unikeze iJubane ngezinsizakalo kwi-Fatherland, Ukuvuthwa nokuhlakanipha. Ukubanika, ungakhumbula izindaba ezifanele kusukela ekuphileni komuntu wokuzalwa.
Kufanelwe ukubonga ukubaluleka komnikelo wesimo sezomnotho sezwe, okuyi "Sberbank", "Teshchabank" ne "Detobank". Kuyafaneleka futhi ukwethula le ncwadi, ukuyihumusha ibe yisimo sejubili ehloniphekile yezwe.
I-Moderator: "Gqoka izindondo zakho njalo ngamaholide, kodwa kuphela entanyeni ehlanzekile! Ungayithatha kanjani, uphese ngotshwala, uphuze konke okusele. Uma ulungele ukuya kuma-movie, gqoka indondo phezu kwengubo yakho. Uma oshade naye eqala ukubuza, ke ungamvumeli ukuba agqoke. Futhi ngokwesiko esidala, indondo kufanele ihlanzwe kahle. "
Emva kwalesi nkulumo, izivakashi zithelela iwayini zibe izibuko futhi ziphuze iJubbe.
Izigcawu zeJubane lomuntu oneminyaka engama-60, amahlaya amahlekisayo kanye nemincintiswano ingase ifakwe izesekeli ezihlukahlukene. Isikhumba singasebenza njengento enjalo. Khetha noma yikuphi ukugqoka okwenziwa umphathi noma isivakashi ekhaya.
Hamba: "Futhi uhlakaniphile, futhi uhle, kodwa kuthiwani ngemicabango yakho? Ake sithole! "
Umethuli ubeka isigqoko sakhe ngeJubane, ngalesi sikhathi udlala i-extracer from the composition "Yebo, konke kuyoba kuhle." Okulandelayo, imfanelo ingabekwa phezu kwekhanda kunoma yisiphi isihlobo noma isivakashi futhi ifaka enye ingoma.
Ikhandlela lomuntu wokuzalwa
Izigcawu zeJubane lomuntu oneminyaka engu-60 yamahlaya yiqiniso, zihle. Kodwa kuyafaneleka ukuhluka kwabo kanye nomzuzwana othintekayo. Kubalulekile ukucela ukuma zonke izivakashi ezikhona etafuleni. Emgqeni wokuqala kufanele amise umfazi ngekhandlela esandleni sakhe, elandelwa yizingane ngabadala, abazukulu, izihlobo nabangane. Isesekeli esivuthayo kufanele sinikezwe ngesandla sisandla kubo bonke abavakashi, futhi wonke umuntu kufanele atshe amazwi amnandi weqhawe losuku.
I-Moderator: "Ikhandlela livuselela bonke abantu abaseduze, mnike konke okuhle futhi uthi izifiso ezinhle. Ayikho umoya ongaqeda lelikhandlela. Ukuphila - njengale moto, eminyakeni engama-60 awuphumeli, kodwa uyaqhubeka ukushisa, ukukhanya nokushisa. "
Ingqikithi yomshini wesikhathi
Wonke amaholidi, okokuqala, kumnandi, ngakho-ke kubalulekile ukulungisa izikhwama zeJubane lomuntu oneminyaka engu-60 yamahlaya. Idivayisi engavamile ivela esiteji - umshini wesikhathi.
I-Moderator: "Ngaphambi kwakho kuyisici esimangalisayo esingabuyisa isikhathi. Futhi namuhla unethuba eliyingqayizivele lokusebenzisa izakhiwo zalo ezinhle. "
Iqhawe liza emotweni, libeka isandla sakhe kuye, ngemuva kwalokho izithombe zakhe zivela kusukela ebuntwaneni, kwentsha nentsha. Ungayishaya ijubili yendoda eneminyaka engu-60 eneskripthi eneziqephu ezivela empilweni yakhe. Njengoba izindima zakhe eziyinhloko zingenza abantu bakhe abaseduze.
Abantu abaningi bathenga imoto abaneminyaka engama-60 . Lapha, imincintiswano ehlukahlukene kanye nemidwebo yendoda eneminyaka engu-60 izoba efanelekile. Imikhosi emihle nayo izofika ngendlela efanele.
I-Moderator: "Ngize ngikujabulise, kodwa hhayi yedwa, ezandleni zami kunezembatho eziningana engizifunayo kuwe. Umlobi womkhosi ungumshayeli wethu, ngakho isihloko seholidi lethu yizimoto. "
UngumFulentshi, ingabe iyoba yintsha, negama lakhe? (Impendulo kaPeugeot)
Ukujabula kweRussia? (Impendulo kaLada)
Ingabe konke okuzungezile kuthuthumela lapho uhamba? (Phendula iJeep)
I-Moderator: "Ngiyabona ukuthi ningabangane bangempela ezimotweni, kufanele niphuze ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngikufisela impilo enhle, abangane abathembekile nenjabulo engapheli! "
Isimo: eziyisishiyagalombili zihamba, futhi umphefumulo ubheka omncane!
Ngaphambi komkhosi, abantu abaseduze badinga ukunquma ukuthi hlobo luni lwezigcawu zendoda eneminyaka engu-60 izobe idlalwe ngaphandle. Uzoqala kuphi? Okokuqala, sidinga ukufakazela ukuthi umfana wokuzalwa, naphezu kweminyaka yakhe, omncane, omuhle futhi oqinile.
Hamba: "Kusihlwa okuhle kubo bonke abaze kulo mkhosi. Sonke sihlangene ukuze sihalalisele iJubane lethu. Ngiphakamisa ukuhlangana naye ngaphansi kwehlombe lakho elikhulu! "
Iqhawe lingena ehholo.
I-Moderator: "Silinde isikhathi eside, konke kugcwele izibuko, kunalokho, phuthuma ukuhlala esihlalweni sakho sobukhosi!"
Itheko lokuzalwa lihlezi etafuleni.
UModerator: "Manje masiphakamise izibuko, futhi wonke umuntu uyophuza ijubane lethu elihle!"
I-Moderator: "Masijabule futhi sidlale ukudoba".
Wonke umuntu obonise isifiso sokudlala uhlukaniswe ngamaqembu amabili. Abahlanganyeli bemi ngemuva kwezihlalo, lapho zonke izingubo ezidingekayo zokudoba zihlala. Inhloso yomdlalo: umuntu ngamunye kumele agijimise esihlalweni futhi agqoke izinto zokufinyelela ezilodwa. Ithimba liphumelele, elikwazi ukuyenza ngokushesha.
Izigcawu ezivela ezihlotsheni nabangani
Lapho kuphume ukunqoba, sekuyisikhathi sokufika ngemidwebo yeJubile yomuntu oneminyaka engama-60. Ngendlela yokuzihlela, izihlobo kufanele zixazululwe. Okokuqala, kufanele kube kusuka enhliziyweni. Vala abantu bangakhumbula isenzakalo esiphundu kakhulu empilweni yeqhawe bese uletha lesi sithombe ukuphila esiteji. I-party yokuzalwa izobonga indlela enjalo yokudala.
Noma yisiphi isivakashi esizodlala indima ehola yalokhu ukusebenza kuzokwenza. Kufanele ahlale eceleni kweJubile, utshele konke ngaye okwedlule futhi ubone esandleni sakhe impilo ende futhi ejabulisayo. Emva kwalokho, izivakashi kufanele ziphuze ndawonye ukuze lokhu kube yiqiniso.
Ngimangaze ngeqhawe losuku
Ucabangile ukuthi yini ongakhetha imidwebo yeJubile yomuntu oneminyaka engama-60? Izinkathazo ezimnandi ziyoba umhlobiso omuhle kakhulu kusihlwa. Isipho esinjalo singaba ividiyo. Ungathatha izindawo lapho usuku lokuzalwa lwazalwa khona futhi luhlala khona. Uma kukhona izibhamu ezivela empilweni ye-hero yosuku, khona-ke zingangeniswa ku-tape. Ungaphinde uhlukanise ifilimu ngokuhalalisela ezihlotsheni ezazisuswa kusengaphambili.
Ungacabanga ngemidwebo yakho ngosuku lomuntu oneminyaka engama-60. Iskripthi yinto ezokwenza leli holide libaleke.
Horoscope. Ukuhambelana: Virgo besilisa + owesifazane Aries